Surf muBermuda uye US East Coast: Tarisira kuti ive inotyisidzira hupenyu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Surf muBermuda uye US East Coast: Tarisira kuti ive inotyisidzira hupenyu
Nhau Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bermuda Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mapundu anogadzirwa neHurricane Florence ari kukanganisa Bermuda uye zvikamu zveUS East Coast. Aya mapundu anogona kukonzera kufa-kutyisidzira hupenyu uye kubvarura mamiriro azvino. Vashanyi uye vafambi vemuno vanofanirwa kugara kunze kwemvura.
Panguva ya1100 AM AST (1500 UTC), ziso reHurricane Florence raive padhuze nehafu latitude 25.0 Maodzanyemba, longitude 60.0 West. Florence ari kufamba akananga kumadokero padyo ne13 mph (20 km / h). Kumavirira-kuchamhembe kwakadziva kumadokero kufamba pamwe nekuwedzera kwekumhanyisa mhanyisa kunotarisirwa mukati memazuva mashoma anotevera. Kutendeuka kuchamhembe kwakadziva kumadokero kunofanirwa kuitika manheru eChitatu manheru. Panzira yekufungidzira, iyo nzvimbo yeFlorence ichafamba pamusoro pekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweAtlantic Ocean pakati peBermuda neBahamas Chipiri neChitatu, yosvika kumahombekombe eSouth Carolina kana North Carolina neChina.
Dhiyabhorosi data inoratidza kuti mhepo dzakasimba dzakasimukira dzakawedzera kusvika padyo negumi neshanu mph (115 km / h) nemhepo dzakakwirira. Florence chikamu chechitatu dutu paSaffir-Simpson Hurricane Wind Scale.
Kuenderera mberi nekusimbisa kunotarisirwa, uye Florence anotarisirwa kuve dutu guru rine njodzi zvakanyanya kusvika China.
Dutu remhepo dzechamupupuri dzinotambanudzira kunze kusvika kumamaira makumi mashanu (30 km) kubva pakati uye mhepo dzinopisa-dutu-remhepo dzinotambanuka kunze kusvika kumakiromita 45 (140 km).
Iyo inofungidzirwa padiki yepakati kumanikidza ndeye 962 mb (28.41 inches).
Hurricane Florence iri kukurumidza kuwedzera munzira yayo inoenda kuEast Coast uye ikozvino iri Chikamu 4 chine 130 mph mhepo, iyo National Hurricane Center yakati mune yakasarudzika. Florence inotarisirwa kusimbisa kusvika ku150 mph nguva pfupi isati yawira kune imwe nzvimbo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kana Mid-Atlantic pamhenderekedzo China manheru.
Computer modhi fungidziro dzinowanzo tarisa dutu kuti riite kudonha pakati pekuchamhembe kweSouth Carolina neNorth Carolina maOuter Banks, kunyangwe mashifti ari munzira anogona, uye madutu mhedzisiro ichawedzera madaro akareba kupfuura uko kudonha kunoitika. Tichifunga nezvekusava nechokwadi uye nguva inotora kuti ubve, vatungamiriri muNorth Carolina vakaburitsa mvumo yekudzinga vanhu Dare County uye Hatteras Island.
Zvave kuwedzera kusafungidzira kuti Florence anozosvika kugungwa oponesa maEastern Seaboard kubva mukukuvadza kungaita dutu, mafashama nemhepo. Kune chimwezve chiratidzo chekuti dutu rinononoka kana kumira pamusoro peMid-Atlantic mumashure mevhiki rino, izvo zvinogona kutungamira kunaya yakawanda.